प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नायिका शर्माले भनिन्ः 'डर लाग्न थालेको छ' खबरमञ्च
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नायिका शर्माले भनिन्ः ‘डर लाग्न थालेको छ’
२३ असाेज, खबरमञ्च, at 11:02 PM
By खबर मञ्च / October 9, 2020 / Comments Off on प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नायिका शर्माले भनिन्ः ‘डर लाग्न थालेको छ’
काठमाडाैं । नायिका ऋचा शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र लेखेकी छन् ।
पछिल्लाे समय बलात्कार लगायत महिलामाथि हुने हिंसाका घट्ना बढ्न थालेपछि नायिका शर्माले फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बाेधन गरेर लामाे पत्र लेखेकी छन् ।
उक्त पत्रमा उनले पछिल्लाे समय आफू असुरक्षित महशुस गर्न थालेकाे र नारी भएर जन्मिएकाेमा डर लाग्न थालेकाे उल्लेख गरेकी छन् ।
यहाँ बालिकाहरुलाइ समम् खुलेआम राक्षसहरुले भोग लगाउँदा, हामी कठैबरा मात्र भएका छौ । जनताको नभए पनि एकचोटी परिवारमा छोरी-नातिनीको आँखामा आँखा जुधाइ भनि हेर्नुस, की यो देशमा उनीहरु सुरक्षित छन ? म सरकारमा विश्वास राख्ने मान्छे, हिजोआज मेरा पैताला डगमगाउदैछन। बाँकी तपाईहरु बुझकी !
Published:2weeks ago on October 9, 2020
Last Modified: October 10, 2020 @ 2:48 pm
रहेनन् पूराना कांग्रेस नेता रामबाबु प्रसाईं
नाका बन्द तर झापामा अवैध बाटोहुँदै ल्याइन थालियो पटका